Archive du 20170606
Alain Ramaroson Hiakatra fitsarana anio
Hiakatra fitsarana anio talata 6 jona i Alain Ramaroson raha tsy misy ny fiovana. Tsiahivina fa efa mananika ny 10 volana izao no nampidirana am-ponja azy eny Antanimora.
Firaisankina fanavotam-pirenena � Ny toekarena tsy voafehy no olana eto ! �
Aoka izay fa mila miara-mientana hanavotana ny firenena isika, hoy ry zareo avy eo anivon�ny vovonana politika Firaisankina Fanavotam-Pirenena (FFP) ny sabotsy teo.
Manantsoa Victor Mbola maro ny �Claudine� eto Madagasikara
Tsy i Claudine A&C ihany no Claudine eto Madagasikara fa mbola maro, hoy i Manantsoa Victor tamin�ny mpanao gazety. Mbola io mpanolotsain�ny filoham-pirenena io ihany aloha no tratra hatreto koa isaorana 100 % ny birao mahaleotena iadiana amin�ny kolikoly.
Taratasin�i Jean Aza mifanao tsinontsinona ary e !
O ry Jean a ! Lagy be aminareo daholo ny bandy akama rehetra tamin�ny sabotsy.
Mpaka an-keriny an�i Yanish Ismael Efa nahazo 10 miliara ariary
Tsy mbola fantatra hatramin�izao ny toerana nitazonan�ireo naka an-keriny an�ilay teratany karana, Yanish Ismael nitranga teny Ankadikely Ilafy, tapa-bolana lasa izay.
Tsy fanekena didim-pitsarana Misy senatera mandrahona mpitsara indray
Lasa lamaody ny fanoherana didim-pitsarana amin�izao fotoana izao. Ny olona tokony ho fitaratry ny fiarahamonina mihitsy no toa zary mpanome leson-dratsy.
Sata mifehy ny mpanao gazety Vita ny fakan-kevitra tany Toamasina
Tontosa ny alakamisy sy ny zoma teo tao amin�ny Lapan�ny tan�na Toamasina ny atrikasa fakan-kevitra sady fanomanana ny sata hifehy ny mpanao gazety.
Fanamarihana ny fetim-pirenena Ahiana indray ny savorovoro ?
Milaza ny ho hentitra ny mpitandro ny filaminana mandritra ny fanamarihana ny fetin�ny fahaleovantena, indrindra fa ho an�ny eto Antananarivo Renivohitra.
Fanaovana an-keriny fananan�olona tao Toamasina Niakatra eto Antananarivo indray ilay teratany vahiny
Tantara tsy misy fiafarany hatreto ny mahakasika ilay teratany vahiny mpietraketraka ao Toamasina.
Aza mifampihatsaravelatsihy !
Lohahevitra hoenti-manamarika ny faha-57 nahazoantsika fahaleovantena amin�ity taona ity ny hoe �Mamiko ny taniko, ny fisandratany no tanjoko�.
Fanariam-pako eny Andralanitra Niova endrika tanteraka
Endrika vaovao no hita eny amin�ny toeram-panariana fako Andralanitra taorian�ny fahavitan�ny fanajariana, ka nitsanganan�ny fotodrafitrasa sy ny fisian�ny fitaovana hoenti-manajary azy.
Fisotroana divay Mahatsara ny fahasalamana raha voalanjalanja
Mahatsara ny fahasalamana amin�ny ankapobeny ny fisotroana divay raha voalanjalanja. Ho an�ny divay miloko mena, ohatra, dia maro ny tombontsoa entiny amin�ny fahasalamana raha ny fanazavan-dRakotozafy Isabelle, dokotera sady mpikirakira divay eo anivon�ny orinasa Clos Malaza
�Grille indiciaire� Niesona herintaona ny mpiasam-panjakana
Nofohazin�ny CTM-SSM Randrambaon�ny sendika ny fampanantenan�ny fitondrana Rajaonarimampianina momba ny �grille indiciaire� rehefa nangina tanteraka tao anatin�izay 12 volana mahery izay.
Sainam-pirenena Mbola tena maina ny tsena
Na dia efa tafiditra tanteraka ao anatin�ny volana jona aza isika ankehitriny dia mbola vitsy ireo tokantrano Malagasy manangan-tsaina. Amin�ny ankapobeny dia noho ny fahantrana efa mandifotra ny isam-baravarana no antony.
Fikambanana Andrianiko ny tanindrazako �Tsy mahomby ny rafi-pampianarana LMD�
Tsy mahomby eto Madagasikara ny rafi-pampianarana LMD (Licence Masters Doctorat), izay mitaky fandaniana bebe kokoa kanefa ny ankamaroan�ny tanora Malagasy tsy maharaka ka tsy afaka mamita ny fianarany hatramin�ny farany,
TRUE DIRECTION LIFE Fahombiazana ny fampisehoana teny Antsahamanitra
Fahombiazana tanteraka ho an�ny tarika True Direction Life (TDL) ilay fampisehoana notontosaina tao Antsahamanitra nyalahadin�ny Pentekosta lasa teo.
Tonga nidina ifotony tany Tsihombe Faritra Androy, ny zoma 2 jona teo, nitokana ny tranon�ny tanora any an-toerana sady nanokatra tamin�ny fomba ofisialy ny fanatanterahana ny lohahevitra nosafidian�ny UA na Vondrona Afrikanina amin�ity taona 2017
Saika feno olona ireo toeram-pitsangantsanganana teto an-drenivohitra nanomboka ny sabotsy teo. Anisan�izany ny teny Tsimbazaza, Analakely,